5 'kuya Main Station nge Breakfast - I-Airbnb
5 'kuya Main Station nge Breakfast
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Beatrix
U-Beatrix Ungumbungazi ovelele
Ifulethi limaphakathi, igumbi lokulala elinosofa nokubukwa kwengadi. Ikhishi elihlome ngokuphelele kanye nendlu yokugezela kuyahlanganyelwa. Kukhona isidlo sasekuseni (ikhofi / itiye, isinkwa, i-mermelade noma ibhotela) Umshini wokuwasha nokomisa. I-WiFi ngaso sonke isikhathi. Indawo yokupaka yamahhala eduze phakathi kuka-6pm no-8 am (bona ngezansi). Ibhasi umzuzu o-1 ukusuka. Ungakwazi ukuhamba futhi ube esiteshini sesitimela ngo-10 '. Umfula i-Aare kanye nechibi lokubhukuda lomphakathi i-Lorrainebad zihamba ngezinyawo ezi-3. Isimo esithulile nesikhululekile endaweni enamasiko amaningi edolobha.
Igumbi linosofa, itafula, indawo yokubeka amajazi kanye nekhabethe lezincwadi, okusho ukuthi unabo bonke ubumfihlo kanye nekhishi eligcwele lokupheka kanye nebhulakufesi elifakiwe (okuyisisekelo) futhi ungalungisa itiye eliphumuzayo kusihlwa. Amakamelo ayahlanzwa nsuku zonke futhi ungabonisana nami nganoma yini oyidingayo.
Lena enye yezindawo ezihamba phambili e-Bern :) kukhona amabha, izindawo zokudlela, futhi yonke into okufanele uyibone iseduze kakhulu. Umfula i-Aare uyi-3 'walk away. Idolobha elidala liku-15 'kude.
Ngiyathanda ukukhuluma kancane nezivakashi kodwa futhi ngiyasihlonipha isikhala. Uma ngingekho ungangithumelela ama message la noma ngo WhatsApp. Ngikhuluma isiNgisi neSpanishi kanti uChris, umyeni wami, naye ukhuluma isiJalimane, isiFulentshi nesiNtaliyane.
Ngiyathanda ukukhuluma kancane nezivakashi kodwa futhi ngiyasihlonipha isikhala. Uma ngingekho ungangithumelela ama message la noma ngo WhatsApp. Ngikhuluma isiNgisi neSpanishi kan…
UBeatrix Ungumbungazi ovelele